Vatongi vatatu vedzimhosva mudare repamusoro vanoti; Justice Happias Zhou, Justice Edith Mushore naJustice Jesta Charehwa, vari kutarisirwa kupa mutongo wavo neMugovera masikati panyaya yatsviriridza zvikuru muZimbabwe.
Vatatu ava vari kupa mutongo panyaya inobata mukuru wavo, Chief Justice Luke Malaba, avo vakawedzerwa nguva yavo yekushanda semukuru wevatongi vematare edzimhosva kwemakore mashanu kutanga nhasi.
VaMalaba vange vachifanirwa kuenda pamudyandigere kutanga nhasi zvichitevera kusvitsa kwavo nhasi makore makumi manomwe ekuberekwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika iro rakashandiswa pakuvagadza pachinzvimbo chavanacho icho chaifanirwa kupera pakati pehusiku nezuro manheru.
Asi mutemo uyu wakavandudzwa zvechimbi chimbi mudare reSenate svondo rapera nebato reZanu PF richitsigirwa nedzimwe nhengo dzeMDC T inotungamirwa naVaDouglas Mwonzora izvo zvakaita kuti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vasaine bhiri iri kuva mutemo.
Hurumende, kuburikidza negurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, vakamboedza kuda kumisa kutongwa kwenyaya iyi nezuro vachiti vatongi vatatu ava vane kwavakarerekera panyaya yaVaMalaba, nokudaro, havafanirwe kutonga nyaya iyi.
Vari kupikisa zvakaitwa naVaMnangagwa, vanova sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Human Rights NGO Forum, vanoti VaMalaba havafanirwe kuwana cheuviri pakuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika sezvo zvichityora zvimwe zvikamu zvebumbiro zvinorambidza kuvandudzwa kwemitemo kuitira kuti vatongi vematare vari pabasa, vawane cheuviri kubva mukuvandudzwa kwemitemo yenyika.
Gweta raVaChamisa panguva iyi, VaThabani Mpofu, rimwe remagweta ari kupikisa kwavanoti kutyorwa kwebumbiro remitemo yenyika izvo zvakazoita kuti VaMalaba varambe vari pabasa.